UPDATE: Shaqaalaha Wasaaradda Warfaafinta Puntland oo shaqadooda ku laabtay & Wasiir kuxigeenka oo qabsaday 48 saac…
GAROOWE(P-TIMES) – Kulan gaar ah oo xalay dhexmaray Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta ee Puntland Cabdisalaan Xaaji Siciid Faarax iyo Shaqaalaha wasaaradda oo ka gadoodsanaa xaquuqdoodii oo ay waayeen, gaar ahaana Gunooyinkii oo ay sheegeen in aysan Wasiirka wasaaraddan soo dhaafin ayaa ugu dambeyntii maanta shaqadooda dib u bilaabay.
Wada hadal saacado qaatay oo ka dhacay xarunta shirarka ee Wasaaradda Warfaafinta ayaa shaqaaluhu ay gudbiyeen cabashadooda ku wajahan arrimaha Xaquuqda ka maqan iyo eedo badan oo ay u soo jeediyeen wasiirka wasaaradda Cali Sabareey.
Shaqaalaha ayaa cabasho ka muujiyey sadex qodob oo ay sheegeen in ay muhiim u tahay in wax laga qabto, haddii kale aysan sii wadi doonin shaqada wasaaradda ayna u dacwoon doonaan madaxda dawladda Puntland.
Qodobada ay ka cawdeen shaqaalaha ayaa kala ahaa.
Adeega Wasaaradda Warfaafinta oo aan soo gaarin xaafiisyada, oo aysan helin adeegyada shaqada ee ay u baahnayeen, xataa ay dhacday in la waayo xaafiisyada waxyaabaha ay u baahnaayeen.
Gunooyinkii Shaqaalaha oo wasiirka ay ku eedeeyeen in uu lunsaday, bilihii ay heleena aysan dhameyn sidii hore, waxayna ku eedeeyeen in ay jirto daahfurnaan la`aan maaliyadeed.
Iyo tixgalin aan lasiinin shaqaalaha Wasaaradda, gaar ahaana Shaqaalaha oo aan lasiinin tababarada ay u baahnayeen kuwa soo baxayna lagu qoray dad kale oo aan aheyn kuwii sharciga u lahaa.
Cabashada Shaqaalaha ayuu qaaday wasiir kuxigeenka Wasaaradda Warfaafinta Cabdisalaan Xaaji Siciid oo balan-qaaday in uu kaga jawaabi doono 48 saacadood gudahood, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in ay shaqada sii wadaan.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu ogaaday in shaqsiyaad aan ku jirin liiska shaqaalaha ee wasaaradda Warfaafinta ay yihiin kuwa ka dambeeya iska horkeenida shaqaalaha iyo wasiirka, isla markaasna qaarkood magaca wasaaradda loogu diray tababaro ay aadi lahaayeen xubno ku shaqo leh oo kamid shaqaalaha wasaaradda.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa horey u balan-qaaday Daahfurnaan maaliyadeed, waxaana arrimaha hadda cabashada Shaqaalaha wasaaradda Warfaafintu ay ku beegmayaan xili la saadalinayo isku shaandheyn xubnaha golaha Wasiiradda Puntland lagu sameyn doono dhamaadka bisha October ee nagu soo wajahan.